Wiilka uu dhalay Ole Gunnar Solskjaer oo u jawaabay Jose Mourinho kaddib dagaalkii afka ah ee labada macallin – Gool FM
(Manchester) 13 Abriil 2021. Wiilka uu dhalay Macallin Ole Gunnar Solskjaer ee lagu magacaabo Noah ayaa dhexda kasoo galay dagaalka ereyada ah ee dhex maray aabbihiis iyo Tababare Jose Mourinho.
Labada macallin ayaa ereyo kulul is dhaafsaday kaddib markii ay soo idlaatay ciyaartii Manchester United ay 3-1 kusoo garaacday Tottenham Hotspur taasoo Axaddii ka dhacday garoonka Tottenham Hotspur Stadium iyagoo ka fal celinayay gacantii Scot McTominay uu wajiga kaga dhuftay Heung-Min Son isla markaasna sababtay in la diido gool ay hoggaanka ciyaart ku qaban lahayd Man United.
Red Devils ayaa si kastaba ha ahaatee adkaatay ciyaartaas, balse Macallin Solskjaer ayaa garoonka kasoo tagay isagoo ka careysan in Son uu dhulka jiifto sidoo kalena uu sabab u noqdo in la diido goolkii ugu horreeyay ee ciyaarta.
“Haddii uu wiilkeygu sidaas oo kale oo garoonka dhex jiifi lahaa saddex daqiiqo, toban ciyaartoy oo kooxdiisa ahna ay imaan lahaayeen si ay u caawin, haa, aniga cunto ma aanan siin lahayn” ayuu yiri tababaraha Manchester United intii uu ku gudo jiray shirkii jaraa’id ee ciyaarta kaddib isagoo Son ku eedeeyay inuu dhulka si jilliin ah u jiiftay.
Hadalka tababaraha reer Norway waxaa ka jawaabay Jose Mourinho oo difaacayay xiddigiisa, waxaana uu yiri: “Sonny waa uu nasiib badan badan yahay, waxa uu leeyahay aabbe ka wanaagsan Ole, maxaa yeelay, haddii aad tahay aabbe, waa inaad caruurtaada quudisaa marwalba, micno ma lahan waxa ay sameynayaan”.
Marka ay halkaas sheeko mareyso, 20-jirka u ciyaara kooxda dalka Kristiansund BK ee Noah ayaa dab ku sii shiday macallinka reer Portugal, waxaana uu tilmaamay in Mourinho uu doonayay inuu diiradda ka dajiyo guuldarrada kooxdiisa soo gaartay.
“Haa, wax badan ayaan qoslay Axaddii” ayuu u sheegay da’yarkan u sheegay Tidens Krav.
“Had iyo jeer cunto waan helaa, qof walbana waan u xaqiijin karaa.
“Weligey dhulka uma aanan jiifan sida Son oo kale, Mourinho waxa uu dabcan doonayay inuu diiradda ka weeciyo xaqiiqda ah inay guuldarreysteen” ayuu yiri wiilka uu dhalay macallinka Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee, ereyada ay is dhaafsadeen macallimiinta Spurs iyo Man United ayaa reebay cinwaanno xiiso badan.
Barcelona oo dardar cusub ku bilawday soo xero gelinta Sergio Aguero... (Hal arrin oo ku qasbeysa iyo hal dhinac oo ay caawin ka heleyso)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich ee Champions League oo la shaaciyey